बिज्ञान / प्रविधि Archives | Page3of3| Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - नेपाल टेलिकमको डाटा पयाकेज अब अनलाइनबाटै - page 3
नेपाल टेलिकमको डाटा पयाकेज अब अनलाइनबाटै
११ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको डाटाप्याकेज अब अनलाइनको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमका अनुसार कम्पनीले उपलब्ध गराएउँदै आएको विभिन्न डाटा प्याकेज अब नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाटै खरिद गर्न सकिने छ। यसका लागि अफर डट एनटीसी डट एनइटी डट एनपीमा लग अन गर्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । लग अन पश्चात आफूले प्रयोग गर्ने जीएसएम वा सीडीएमए मोबाइलका विभिन्न डाटा प्याकेज छनोट गर्न सकिने बछ। विभिन्न डाटा प्याकेजको मूल्य र समयावधि समेत उक्त अनलाइनमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर र पीयूके नम्बर राख्नुपर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
फेसबुकले घर बनाइदिने !
२ साउन,एजेन्सी ।विश्वको नम्बर एक समाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीको लागि घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ। फेसबुकले अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा घर निर्माण गरिदिने योजना लागू गर्ने भएको हो। १५ सय संख्यामा निर्माण हुने घरहरु फेसबुक हेडक्वाटर नजिकै हुने फेसबुकले जनाएको छ। फेसबुक, अल्फाबेट इंक, गुगल र अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीहरुका कारण अमेरिकाको सान फ्र्यान्सिस्कोमा आवासको कमी भएको बताइएको छ। जसका कारण फेसबुकका कर्मचारीहरुलाई कस्ट व्यवहोर्नुपरेको छ। त्यहाँबाट अन्यत्र जान समय पनि धेरै लाग्ने भएकाले हेडक्वाटर नजिकै घर बनाइदिने फेसबुकले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाएरै छोड्छौँ– राष्ट्रपति ट्रम्प
९ असार, काठमाडौं । आफ्नो चुनावी अभियानको हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको अमेरिकी–मेक्सिकन मुद्दामा आफु निर्वाचित भएपछि पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोलाई संसारको हिंसाजन्य देशमध्येको दोस्रो ठूलोको संज्ञा दिएका छन् । उनले शुक्रबार आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमा भनेका छन्– मेक्सिको सिरियापछिको दोस्रो ठूलो हिंसाजन्य देश हो । त्यहाँ बर्षेनी हजारौँ नागरिक मारिन्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
७ असार,काठमाडौं । राजधानीको गोगंबुस्थित बिजी मलमा मोबाइल एक्स्पो सुरु भएको छ । सामसुङ ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो नाम दिइएको मोबाइल मेला १० दिनसम्म चल्ने छ । एक्स्पो अवधिभर ग्राहकहरुले बिजी मलका सबै फेन्सी पसलहरुमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । बिजी मलका अध्यक्ष बासु गिरीले देशभरीका उपभोक्तालाई एकै स्थानबाट धेरै भन्दा धेरै ब्राण्डका मोबाइलका साथै उपभोग्य सामग्री सहज रुपमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । मोबाइल एक्सपो पनि यसैको एउटा पाटो भएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको भनाई थियो ।	थप पढ्नुहोस्
भौतिक विज्ञानमा प्रवेगको नभई प्रदूर्यान्तरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने खुलासा
७ असार, काठमाडौं । भौतिकशास्त्रमा प्रवेगको नभई प्रदूर्यान्तरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथ्य खुलासा भएको छ । म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटका युवा वैज्ञानिक एवम् खोजकर्ता भवीन्द्र कुँवरले अनुसन्धान गरी उक्त तथ्य पत्ता लगाएका हुन् । यसबाट प्रवेग र सुवात इतिहासमा सीमित हुने भएका छन् । कुँवरले भौतिक विज्ञानमा चार शताब्दीदेखि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ‘प्रवेग’ नामक भौतिक शास्त्रीय परिमाण विज्ञानसम्मत आधारमा निर्माण नभएको नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सहज प्रविधि
६ असार, काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्को समयमा सञ्चारको सहज पहुँच स्थापना गर्न सरकार, उद्धारकर्ता, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नागरिककोे भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको टेलिकम्युनिटीले आयोजना गरेको ‘विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार’ विषयक कार्यशालामा सहभागीले विपद्मा मानवीय सुरक्षा र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना नै पहिलो माध्यम रहेको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
असार ५ गतेबाट मोबाइल एक्स्पो हुने
१ असार, काठमाडौं । केएल मोबाइल हब यही असार ५ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । चाबहिलस्थित केएल टावरको भुइँ तल्लामा सञ्चालनमा आउने केएल मोबाइल हबमा विश्व बजारमा पाइने २३ भन्दा बढी मोबाइल कम्पनीका उत्पादनको कारोबार गरिने छ । हबमा एमआइ, आइफोेन, सामसङ, सोनी एक्सपेरिया, जियोनी, ओप्पो, एचटिसी, जेटटिइ, हुवावे, कुलप्याड, लेनेभो, वान प्लस, नोकिया, कलर्श, मोटोरोला, जोप्पो र ओबिआइका टच एण्ड फिल काउन्टर समेत रहने हबका सञ्चालक सङ्गम राइले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा, तपाईंलाई लत लगाउने छ यसले…..
१ असार,काठमाडौं । इसानी टेक्नोलोजीले टाइगर ट्राप नामक रमाइलो मौलिक नेपाली खेलको एन्ड्रोइड एप्लिकेशन सार्बजनिक गरेको छ । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित यो नयाँ एप्लिकेसन अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ छ । पराम्परागत बाघचाललाई नयाँ स्वाद र रोचकता थपेर टाइगर ट्राप गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ । गेमको नामले बताएझै विभिन्न १५ लेभलमा रहको यो गेम जित्न गोट अर्थात बाख्राले बाघलाई ट्राप (घेराबन्दी) मा पार्नुपर्छ । निकै चातुर्यतापूर्वक खेल्नु पर्ने यस खेलमा बाघले बाख्रालाई खानबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
३० करोड बक्यौता नतिर्दै दुरसञ्चारको लाइसेन्स किन दियो प्रचण्ड सरकारले ? करोडौं कमिशन चलखेलको आशंका
२७ जेठ,काठमाडौं। कामचलाउ सरकारका रूपमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै ३० करोड राजस्व नतिरेको कम्पनीलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर विवादित निर्णय गरेको छ । राज्यलाई यति ठूलो कर तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई अनुमति दिनुको निर्णयपछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य सबैले गरेका छन् । विनोद चौधरीको स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनी रामेश्वर थापाका नाममा नामसारी भएसँगै गरिएको यो निर्णयमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दावी सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरू बताउँछन् ।	थप पढ्नुहोस्
नेपालकादशलाख घरमाविश्वस्तरीय फाइवर सेवाको विस्तार गर्न तथाउच्चगतिको ‘१०० जीबीपिएस’ नेटवर्कविस्तारको शुरूवात ।
जेष्ठ ६, काठमाडौँ वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनस प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०२० सम्म नेपालकादशलाख घरमाविश्वस्तरीय ‘फाइवर टु द होम (ँत्त्ज्) नेटवर्क सेवाको विस्तार गर्ने योजनालिएको छ। कम्पनीले नेपालकामुख्यशहर, शहरोन्मुख वस्ती तथा जनघनत्व धेरै भएका ग्रामीण वस्तीहरूलाई लक्षितगर्दै छिटो, भरपर्दो र आमनागरिकले उपभोग गर्न सक्ने इन्टरनेट सेवातथा इन्टरनेट प्रोटोकलकामाध्यमद्वारा प्रदानगरिने अत्याधुनिकप्रविधिमाआधारित टेलिभिजन सेवा (क्ष्एत्ख्) प्रदानगर्ने लक्षलिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्